Famatsiam-bola avy amin’ny FEM : hiarovana ny ala sisa tavela sy ny biby ao aminy | NewsMada
Famatsiam-bola avy amin’ny FEM : hiarovana ny ala sisa tavela sy ny biby ao aminy
Natao ny herinandro lasa teo, teto an-dRenivohitra, ny atrikasa hahazoana famatsiam-bola avy amin’ny Tahiry iraisam-pirenena ho an’ny tontolo iainana sy ekolojia (Fonds pour l’environnement mondial). Atrikasa iraisana amin’ny faritra Afrika atsinanana, ahitana firenena 14.
Famatsiam-bola avy amin’ny Fem, hijerena vahaolana manokana hiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro, fahasimban’ny ekolojia sy ny loto isan-karazany. Miainga avy amin’ny fanadihadiana ny zava-mitranga amin’ireo lohahevitra ireo ny namariparitana izay tetikasa hatao sy izay tetibola tokony ho amin’izany. Nahitana fahombiazana ny fampiasana ny Fem faha-5 azon’i Madagasikara, raha ny filazan’ny minisitry ny Tontolo iainana, Ndahimananjara Johanita, ary ho an’ny Fem faha-6 ny niadian-kevitra farany teo.
Nanaovana atrikasa ny hanohizana ny asa tokony hatao eto an-toerana ihany, nifampizarana traikefa amin’ireo firenen-kafa avy amin’ny faritra Afrika Atsinanana. Betsaka ny asa atao mahakasika sehatra maro momba ny tontolo iainana, indrindra ny fiarovana ireo ala sisa tavela sy ny biby ao aminy. Tokony hifandraika amin’izany ny politika momba ny angovo. Ny fahalafosan’ny saribao ankehitriny, ohatra, manome vahana hatrany ny fahapotehan’ny ala. Ny faran’ny herinandro namaranana ny atrikasa, nandehanan’ireo teknisianina nidina tany Andasibe nijery ny zava-misy any an-toerana.
Tetikasa 1000 mahery maneran-tany
Ny Fem, tahiry ho an’ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena samihafa, hiadiana amin’ireo loza manimba ny tontolo iainana, misy fiantraikany maneran-tany. Anisan’izany ny fiovan’ny toetr’andro, fahalotoan’ny rano, fahasimban’ny tany volena, sns. Sakana ho an’ny asa fampandrosoana avokoa ireny ary indrindra manimba ny fahasalamana. Tetikasa miisa 1000 mahery amina firenena 140, nahazoana famatsiam-bola 4 miliara dolara sy 12 miliara dolara fanampiny, iarahan’ny Fem amin’ny mpamatsy vola hafa.